Arbacada, February 10, 2016 Douglas Karr
Markii aan u wareejinay boggayaga Flywheel, kuma aanan qasbin qof walba xiriir SSL ah (cinwaanka https: // url ee hubiya isku xir aamin ah). Wali go'aan kama gaarin arintan. Waxaan hubin karnaa in soo gudbinta foomka iyo qaybta ecommerce ay amaan yihiin, laakiin aan hubin kaliya celceliska maqaalka la aqrinayo. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxaan ogaannay in xiriiradayaga suugaanta ahi ay muujinayaan ammaan iyo amni labadaba. Wax badan kama akhrin